Ubuntu 20.04.3 LTS dia miaraka amin'ny Linux 5.11, Mesa 21.0, fanavaozana ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Ubuntu 20.04.3 LTS dia miaraka amin'ny Linux 5.11, Mesa 21.0, fanavaozana ary maro hafa
Darkcrizt | 07/09/2021 00:39 | Fitsinjarana
Ny fanavaozana vaovao an'i Ubuntu 20.04.3 LTS dia efa navotsotra manao andro maromaro ary ao fanovana mifandraika amin'ny fanatsarana ny fanohanan'ny fitaovana tafiditra ao anatiny, Fanavaozana ny kernel Linux sy ny sary sokitra, ny mpanamboatra ary ny fanamafisana ireo bibikely bootloader.
ihany koa misy ny fanavaozana farany ny fonosana an-jatony hamahana ny olana marefo sy fitoniana, miampy fanavaozana mitovy amin'izany navoaka ho an'ny Ubuntu Budgie 20.04.3 LTS, Kubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu MATE 20.04.3 LTS, Ubuntu Studio 20.04.3 LTS, Lubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.3. 20.04.3 LTS sy Xubuntu XNUMX LTS.
Ity kinova fahatelo ity dia manambatra ireo fanavaozana ny rindrambaiko rehetra navoaka hatramin'izao, ary koa ireo patch isan-karazany sy ireo fanitsiana bibikely.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Ubuntu 20.04.3 LTS
1.1 Ahoana ny fanavaozana ny fanavaozana Ubuntu 20.04.3 LTS vaovao?
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Ubuntu 20.04.3 LTS
Ubuntu 20.04.3 LTS ahitana ny fanatsarana ny kinova Ubuntu 21.04 izay ahitantsika fa ny fanavaozana dia natao ho an'ireo fonosana miaraka amin'ny kinova 5.11, satria ny Ubuntu 20.04 sy 20.04.1 dia nampiasa ny kernel 5.4 ary ny 20.04.2 nampiasa ny kernel 5.8.
Toy ny mahazatra, HWE (Hardware Enablement Stack) dia nohavaozina tamin'ny fahatongavan'ny Linux kernel 5.11 Ity kinova ity dia misy fanatsarana maro ho an'ny Btrfs, manasongadina ireo safidy azo ampiasana rehefa manangona angona avy amin'ireo rafitra rakitra efa simba, ary koa ny fanesorana ny fanohanana ny safidy mount "" inode_cache "efa lany daty. pejy (PAGE_SIZE), ary koa ny fanohanana ny habaka zoning.
Ankoatr'izay misy mekanika vaovao nampiana mba hisakanana ireo antso amin'ny rafitra, miorina amin'ny prctl () ary izany dia mamela ny fanipazana fanilikilihana avy amin'ny habakan'ny mpampiasa rehefa miditra amin'ny antso manokana sy maka tahaka ny fanatanterahana azy. Ity fampiasa ity dia nangatahina tao amin'ny Wine sy Proton haka tahaka ny fiantsoana ny rafitra Windows, izay ilaina mba hiantohana ny fifanarahana amin'ireo lalao sy programa izay manatanteraka mivantana ny antso an-tariby nefa tsy mandalo ny Windows API.
Ho an'ny maritrano RISC-V, fanampiana ny rafitra fizarana fahatsiarovana Memory Contiguous Memory Allocator no nampiana (CMA), izay nohamarinina hanokana faritra fahatsiarovana midadasika amin'ny alàlan'ny teknikan'ny fivezivezena pejy. Ho an'ny RISC-V, misy ihany koa ireo fitaovana ampiharina mba hamerana ny fidirana amin'ny / dev / mem ary hikajiana ny fotoana fanodinana tapaka.
Amin'ny lafiny mpanara-maso afaka mahita ny takelaka 21.0, ankoatr'izay koa nohavaozina miaraka amin'ny GNOME Shell 3.36.9 ny tontolon'ny birao, LibreOffice 6.4.7, Mozilla Firefox 91, GCC 10.3.0, Python 3.8.10, containerd 1.5.2, ceph 15.2.13, snapd 2.49, cloud-init 20.4, ary ny rindranasa hafa.
Amin'ny ampahany amin'ireo singa amin'ny stack graphics izay nohavaozina, dia ao anatin'izy ireo ny X.Org Server 1.20.11 sy Mesa 21.0, izay notsapaina tamin'ny kinova Ubuntu 21.04. Nampiana kinova vaovao an'ny mpamily video ho an'ny chips Intel, AMD ary NVIDIA.
Ho an'ny rafitry ny mpizara dia nasiana kernel vaovao ho safidy amin'ny installer, miampy fivoriambe vaovao izao dia hampiasaina amin'ny fametrahana vaovao fotsiny: ny rafitra efa napetraka teo aloha dia afaka mandray ny fanovana rehetra hita ao amin'ny Ubuntu 20.04.3 amin'ny alàlan'ny rafitra fametrahana fanavaozana mahazatra.
Tokony hotadidintsika izany maodely fanohanana fanavaozana mitohy no ampiasaina hanaterana kinova vaovao ary ny stack stack, izay ahitan'ny kernels sy mpamily voatazona mandra-pivoakan'ny fanavaozana ny sampana Ubuntu LTS izay manaraka. Ohatra, ny kernel Linux 5.11 naroso tamin'ny famoahana ankehitriny dia tohanana hatramin'ny Ubuntu 20.04.4, izay hanolotra kernel Ubuntu 21.10. Nalefa tany am-boalohany, ny kernel 5.4 fototra dia tohana mandritra ny dimy taona.
Tsy toy ny kinovan'ny LTS teo aloha, ny kinova farany an'ny kernel sy ny stack graphic dia hiditra amin'ny fametrahana efa misy ny Ubuntu Desktop 20.04 amin'ny toerana misy anao ary tsy atolotra amin'ny endrika safidy. Raha miverina miverina amin'ny kernel 5.4, alao ny baiko:
Ahoana ny fanavaozana ny fanavaozana Ubuntu 20.04.3 LTS vaovao?
Ho an'ireo liana ary ao amin'ny Ubuntu 20.04 LTS, dia afaka manavao ny rafitr'izy ireo amin'ilay fanavaozana vaovao navoakan'ny fanarahana ireto torolalana ireto izy ireo.
Raha mpampiasa Ubuntu Desktop izy ireo, sokafy fotsiny ny terminal eo amin'ny rafitra (azon'izy ireo atao amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana Ctrl + Alt + T) ary ao anatiny no soratany ity baiko manaraka ity.
Amin'ny faran'ny fisintomana sy ny fametrahana ireo fonosana rehetra, na dia tsy ilaina aza izany, dia manolo-kevitra ny hanao famerenana indray ny solosaina izahay.
Ankehitriny ho an'ireo mpampiasa mpizara Ubuntu, ny baiko tokony hataon'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ubuntu 20.04.3 LTS dia miaraka amin'ny Linux 5.11, Mesa 21.0, fanavaozana ary maro hafa
MX-21 Beta 2: Misy ny kinova vaovao an'ny MX Linux 21 - Flor Silvestre
MATE 1.26 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny app, ny fanohanana Wayland ary maro hafa